Momba anay - Raisefiber Communication Co., Ltd.
■ Ny mombamomba ny orinasa
Raisefiber naorina tamin'ny Nov, 2008, dia mpamokatra eran-tany amin'ny singa fibre optic manana mpiasa 100 sy orinasa 3000sqm. Efa nandalo ISO9001: 2015 Quality Management System Certification sy ISO14001 Environmental Management System Certification. Na inona na inona firazanana, faritra, rafitra ara-politika ary finoana ara-pinoana, Raisefiber dia natokana hanomezana vokatra sy serivisy fifandraisana fibre optika avo lenta ho an'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao!
Amin'ny maha-orinasa manerantany azy, Raisefiber dia manolo-tena amin'ny fametrahana fifandraisana tsara amin'ny mpanjifa sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, ary koa amin'ny firenena sy faritra samihafa, ary mandray andraikitra mavitrika amin'ny fiaraha-monina. Mba ho orinasa hajaina, ho olona hajaina, dia manohy ny ezaka ny Raisefiber.
■ Piraofilin'ny orinasa
■ Inona no ataontsika
Hatramin'ny nahaterahan'ny fifandraisana fibre optika, ny teknolojia fifandraisana sy ny fampiharana fibre optika dia nivoatra haingana. Ny vokatra fifandraisana optika dia nohavaozina sy nohavaozina, ary lasa mandroso sy matotra kokoa ny vokatra azony. Ny teknolojian'ny fifandraisana optika dia mihamaro ihany koa no ampiasaina, mahakasika ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika. Mba hamenoana ny fitomboan'ny fangatahan'ny mpampiasa amin'ny fampitana angon-drakitra.
Misy karazana vokatra fifandraisana optika maro eny an-tsena. Ny vokatra avy amin'ny mpanamboatra samihafa dia mipoitra amin'ny renirano tsy misy farany. Ny vidiny sy ny kalitao dia tsy mitovy.
Manantena izahay ny hanangona ny talenta tsara indrindra, ny endrika ary ny vokatra amin'ny fifandraisana optika, ary mametraka ny fenitra marika Raisefiber miaraka amin'ny kalitao avo lenta sy mahomby amin'ny vokatra fifandraisana optika. Omeo ny mpanjifanay vahaolana tokana mamonjy fo sy matihanina. Serivisy mpanjifa tsara kokoa, mitahiry fotoana sy teti-bola sarobidy ho an'ny mpanjifa, mba hahatonga ny teknolojia fifandraisana optika manerana izao tontolo izao ho malaza kokoa sy fampiharana.
■ Nahoana no Ifidy Antsika
NY TENY FANANTENANAY AMINAO
Manomboka amin'ny fanadihadiana ka hatramin'ny fanaterana dia hahazo fomba fiasa matihanina tsy tapaka ianao. Ny zava-drehetra ataontsika dia tohanan'ny ISO Quality Standard, izay tafiditra ao anatin'ny Raisefiber nandritra ny folo taona mahery.
RESPONSIVENESS - ora 1 ora famaliana
Manan-danja amin'ny serivisy mpanjifa izahay ary miezaka mamaly haingana araka izay tratranay. Ny tanjonay dia ny hiverina aminao ao anatin'ny 1 ora fiasana mba hiresaka momba ny zavatra takinao.
TOROHEVITRA TEKNIKA - Torohevitra ara-teknika maimaimpoana
Manolotra torohevitra sariaka sy manam-pahaizana avy amin'ny ekipa manam-pahaizana manokana momba ny tambajotra. Tonga eto izahay hahatakatra ny zavatra takinao ary hanoro ny vokatra tsara indrindra ho anao.
Mikasa ny hitondra vokatra ho anao amin'ny fotoana mety hahafeno ny fe-potoanao.